सुन्दा अचम्म लाग्ने : पानीको स्रोत नै कम भएका मुलुकहरुबाट नेपालमा आयत हुन्छ पानि - Himali Patrika
सुन्दा अचम्म लाग्ने : पानीको स्रोत नै कम भएका मुलुकहरुबाट नेपालमा आयत हुन्छ पानि
हिमाली पत्रिका २५ माघ २०७६, 2:56 am
काठमाडौं, २३ माघ । नेपालका हिमनदीको पानी विश्वमै गुणस्तरीय मानिन्छ । ठूल–ठूला हिमनदीहरु पानीका स्रोत हुन् । तर, नेपालले खाडी मुलुकबाट पानी आयात गर्नुपर्ने विडम्वना रहेको छ । ५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा औषतमा वार्षिक १ करोडभन्दा बढी रकमको पानी आयात हुने गरेको छ ।
के तपाईलाई थाहा छ ? नेपालले पानी पनि आयात गर्छ ! सुन्दा अचम्म लाग्ला, त्यो पनि खाडी मुलुकबाट । पानीको स्रोत नै कम भएका मुलुकहरुबाट जलस्रोतको धनी मानिएको नेपालले पानी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता ? संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई)ले मात्र गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ सय ४० लिटर पानी नेपाल पठायो । चीन, जापान, फिलिपिन्स जस्ता देशहरुबाट पनि पानी आयात हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ८ करोड १ लाख ९६ हजार रुपैयाँको पानी आयात भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै १ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको पानी आयात भएको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १५ लाख २८ हजार रुपैँयाको पानी आयात भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुन देशबाट कति पानी आयात ?
पानी आयात गरिनुपर्ने कारण के हो ? यो प्रश्नमा सरोकारवालाहरुले नेपालमा गुणस्तीय पानी नबन्ने गरेको जवाफ दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गुलियो तथा अन्य पदार्थ मिश्रण नगरेको शीर्षकमा ५ हजार रुपैयाँको २ लिटर पानी निर्यात गरेको भेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भने १ लाख ६५ हजारको पानी निर्यात गरेको छ ।
गुणस्तरीय पानी उत्पदान भए नेपालको हिमनदीका पानीको विदेशमा माग बढी छ । तर, त्यसका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । सरकारले पर्याप्त जलस्रोत हुदाँहुदै त्यसलाइ परिचालन गर्न नसक्दा बर्षौ देखी पानी आयात गर्नु परेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।